महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन ब्युटी पार्लर तालिम सुरु ! - Sabal Post
महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन ब्युटी पार्लर तालिम सुरु !
२६ चैत्र २०७५, मंगलवार ० बिचार / प्रतिक्रिया
गाउँपालिका अध्यक्ष शर्मा भन्छन महिला र पुरुष बिचको भिन्नता अन्त्य गर्न तालिम सुरु गरिएको हो !
रबिन्द्र यादव/ नवलपरासी पश्चिम – नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर गाउँपालिकामा मंगलबारदेखी एक महिने ब्युटी पालर्र तालिम सुरु भएको छ । प्रतापपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ को सहयोगमा र को लक्ष्मी अामा समूह मेगहीको आयोजनामा ज्ञान मन्दिर प्रा वि सुर्यपुरामा सिपमुलक ब्युटिसियन तालिम सुरु भएको हो ।
तालिमको उद्घाटन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार शर्माले गाउँपालिकामा महिला र पुरुष बिचको भिन्नता अन्त्य गर्न तालिम सुरु गरिएको बताए । महिला र पुरुष बीचको भिन्नता अन्त्य गर्न महिलाहरुले आत्मनिर्भर हुन जरुरी रहेकोले महिलाहरुको लागि सिप मुलक ब्युटी पालर्र तालिम संचालन गरिएको अध्यक्ष शर्माले बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी समेत रहेको अध्यक्ष शर्माले तालिमबाट सिप सिखेर महिलाहरु आयआर्जन गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने बताए । विशिष्ट अतिथि वडा अध्यक्ष हरेन्द्र कुमार यादवले सिपले महिलाको पहिचान स्थापित गर्ने बताए ।
महिलाहरु घरमा मात्र सिमित नभई तालिमबाट सिप सिखी आर्थिक विकास गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिनुभयो । गाउँपालिका भित्र रहेका बेरोजगार नागरिकहरुलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सिपमुलक तालिम संचालन गरिएको उनले बताए । लक्ष्मी अामा समूह अध्यक्ष पुजा चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उद्घाटन समारोहमा वडा सदस्य हरिनाथ पासी, भवानी शंकर चौधरी,स्मिता हरिजन, लगायतले आ- अाफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । वडा भित्रका ५० जना महिलाहरुको सहभागिता रहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।
गुल्मीका मृतक मोहन प्रसाद चुँदालीको परिवारले दिए…
हत्याको विरोधमा देवदहमा तरुण दलको चक्काजाम
गाजलु निर्माता र दिपक दिपाबीच नया चलचित्रको…
बुटवलका एक घरधनीले दिए ८० हजारबढी घरभाडा…